“Heshiiska uu Malcolm ugu dhaqaaqay Barcelona way adag tahay in la fahmo”…Agaasimaha ciyaaraha kooxda Roma Monchi – Gool FM
“Heshiiska uu Malcolm ugu dhaqaaqay Barcelona way adag tahay in la fahmo”…Agaasimaha ciyaaraha kooxda Roma Monchi
(Roma) 25 Luulyo 2018. Agaasimaha ciyaaraha kooxda Roma Monchi ayaa qabtay shir jaraa’id uu kaga hadlay faafaahinta waxa dhacay sacadihii lasoo dhaafay, gaar ahaan heshiiska laacibkii hore kooxda Bordeaux ee Malcolm uu ugu dhaqaaqay Barcelona.
Monchi ayaa dareen caro leh ka muujiyay qaabka loola dhaqmay kooxda Roma saacadihii lasoo hdaafay ee ku aadan dhinacayada heshiiska Malcolm kaasoo talaabo uun kaliya u jiray inuu ku biiro kooxda Roma inta lagu jiray suuqan xagaaga.
Kooxaha Roma iyo Bordeaux ayaa ka wada heshiiyay saxiixa Malcolm, kahor inta aysan Barcelona soo galin heshiiska laacibkan oo ugu dambeyn la wareegtay.
Hadaba Monchi oo shir jaraa’id kasoo muuqday ayaa yiri: “Waxa dhacay ee ku aadan kiiska Malcolm way fududahay in la sharxo, balse way adag tahay in hadana la fahmo”.
“Waxaan wadahadal la sameenay kooxda Bordeaux todobaad ka hor, ka dib labo ama seddex maalmood oo wadahadal ah, waxaan ka heshiinay kiiskan”.
“Wada hadalada ayaa inoo xirmay, kaliya waxaa ka dhinaa in laacibka lagu amro inuu u dhaqaaqo kooxda Roma si uu u maro tijaabada caafimaadka”.
“Laakiin wax walba ayaa isbedelay kadib markii aan maqalnay warar ku aadan in laacibka uu gaaray kooxda Barcelona, waxay gudbiyeen dalab ka xoogan kan Roma”.
“Wakiilka laacibka ayaa igu war galiyay inaan dalabka aan sare u qaadno, waxaan ka gudbinay dalab labaad, balse wax jawaab ah kama aanan helin ilaa iyo laacibka uu kaga dhaqaaqo kooxda Barcelona”.
Manchester United oo qeyb kasoo noqotay kooxaha xiiseenaya difaaca kooxda Barcelona ee Yerry Mina